ကိုဗစ်ကာလဝင်ငွေမရှိတော့ စိတ်ရှိတိုင်းမလှူနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ ဂျွန်လွင် – Askstyle
ကိုဗစ်ကာလဝင်ငွေမရှိတော့ စိတ်ရှိတိုင်းမလှူနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ ဂျွန်လွင်
ေမာ္ဒယ္လ္ေလာကရဲ႕ဖခင္ႀကီးလို႔ ေခၚေဝၚၾကတဲ့ ဂြၽန္လြင္ကေတာ့ လိုအပ္တဲ့ေနရာတိုင္းကို လက္မေႏွးကူညီတတ္သူတစ္ေယာက္မို႔ ပရိသတ္ေတြေလးစားခ်စ္ခင္ေနရသူပါ။ အၾကင္နာတရားထြန္းကားေရး ေဆာင္ပုဒ္ေလးကို အၿမဲလက္ကိုင္ထားၿပီး လိုအပ္ေနသူေတြကို ကူညီေပးခဲ့႐ုံမက ကိုဗစ္ပထမလႈိင္းမွာလည္း ခက္ခဲဒုကၡေရာက္ေနသူေတြကို ဆက္တိုက္ဆိုသလို လႉဒါန္းေပးခဲ့ပါေသးတယ္။
တစ္ႏွစ္နီးပါးျပည့္ေတာ့မယ့္ ကိုဗစ္ကာလေၾကာင့္ အလုပ္ေတြရပ္နားထားရၿပီး ရွိတဲ့ေငြေတြကို ထိုင္သုံးေနရတဲ့သူေတြမ်ားလာသလို အၿမဲလႉေပးေနၾကတဲ့အလႉရွင္ေတြပါ ထိခိုက္လာၾကတာေတာ့ အမွန္ပါ။ ဂြၽန္လြင္ကိုယ္တိုင္လည္း ဝင္ေငြမရွိတာေၾကာင့္ အရင္လိုမလႉႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္းကို သူ႔ရဲ႕ေဖ့ဘြတ္ခ္အေကာင့္မွာ မွ်ေဝခဲ့ပါတယ္။ ငါေလဝင္ေငြမရွိေတာ့ စိတ္ရွိတိုင္းမလႉနိင္… လႉခ်င္ေသာ္လည္း ခ်င့္ခ်ိန္ရ…. ဒီလကုန္ထီေပါက္ရင္ေကာင္းမယ္ ဆိုၿပီး ေရးသားမွ်ေဝလာပါတယ္။
လႉေနရမွ ေက်နပ္ေနတဲ့သူေတြအတြက္ ဝင္ေငြမရွိလို႔ ခ်င့္ခ်ိန္ေနရ စိတ္ရွိတိုင္း မလႉေပးႏိုင္တာကေတာ့ စိတ္ထိခိုက္စရာပါပဲ ပရိသတ္ႀကီးေရ… ခက္ခဲဒုကၡေရာက္ေနတဲ့သူေတြအတြက္ အလႉရွင္ေတြလိုအပ္သလို လႉခ်င္ေပမယ့္လည္း ကိုယ့္အတြက္ပါ ျပန္ခ်င့္ခ်ိန္ေနရတဲ့အခိုက္အတန္႔ကေတာ့ ဂြၽန္လြင္အတြက္ တကယ္ကိုခက္ခဲေနမွာ အမွန္ပါပဲ။ ကိုဗစ္ကာလႀကီး ျမန္ျမန္ၿပီးဆုံးၿပီး အစစအရာရာ ျပန္အသားက်သြားဖို႔က တကယ္ကိုအေရးႀကီးတဲ့အရာပါပဲေနာ္။
မော်ဒယ်လ်လောကရဲ့ဖခင်ကြီးလို့ ခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ ဂျွန်လွင်ကတော့ လိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းကို လက်မနှေးကူညီတတ်သူတစ်ယောက်မို့ ပရိသတ်တွေလေးစားချစ်ခင်နေရသူပါ။ အကြင်နာတရားထွန်းကားရေး ဆောင်ပုဒ်လေးကို အမြဲလက်ကိုင်ထားပြီး လိုအပ်နေသူတွေကို ကူညီပေးခဲ့ရုံမက ကိုဗစ်ပထမလှိုင်းမှာလည်း ခက်ခဲဒုက္ခရောက်နေသူတွေကို ဆက်တိုက်ဆိုသလို လှူဒါန်းပေးခဲ့ပါသေးတယ်။
တစ်နှစ်နီးပါးပြည့်တော့မယ့် ကိုဗစ်ကာလကြောင့် အလုပ်တွေရပ်နားထားရပြီး ရှိတဲ့ငွေတွေကို ထိုင်သုံးနေရတဲ့သူတွေများလာသလို အမြဲလှူပေးနေကြတဲ့အလှူရှင်တွေပါ ထိခိုက်လာကြတာတော့ အမှန်ပါ။ ဂျွန်လွင်ကိုယ်တိုင်လည်း ဝင်ငွေမရှိတာကြောင့် အရင်လိုမလှူနိုင်တော့ကြောင်းကို သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ်အကောင့်မှာ မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ ငါလေဝင်ငွေမရှိတော့ စိတ်ရှိတိုင်းမလှူနိင်… လှူချင်သော်လည်း ချင့်ချိန်ရ…. ဒီလကုန်ထီပေါက်ရင်ကောင်းမယ် ဆိုပြီး ရေးသားမျှဝေလာပါတယ်။
လှူနေရမှ ကျေနပ်နေတဲ့သူတွေအတွက် ဝင်ငွေမရှိလို့ ချင့်ချိန်နေရ စိတ်ရှိတိုင်း မလှူပေးနိုင်တာကတော့ စိတ်ထိခိုက်စရာပါပဲ ပရိသတ်ကြီးရေ… ခက်ခဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေအတွက် အလှူရှင်တွေလိုအပ်သလို လှူချင်ပေမယ့်လည်း ကိုယ့်အတွက်ပါ ပြန်ချင့်ချိန်နေရတဲ့အခိုက်အတန့်ကတော့ ဂျွန်လွင်အတွက် တကယ်ကိုခက်ခဲနေမှာ အမှန်ပါပဲ။ ကိုဗစ်ကာလကြီး မြန်မြန်ပြီးဆုံးပြီး အစစအရာရာ ပြန်အသားကျသွားဖို့က တကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အရာပါပဲနော်။